नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी समर्थक भेट्न सडकमा उत्रिए !
नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी समर्थक भेट्न सडकमा उत्रिए !
नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी समर्थक भेट्न सडकमा उत्रिएका छन् । संसदलाई सम्बोधन गर्न नयाँबानेश्वरस्थित संसद भवनमा जाने क्रममा सडकको दुई किनारामा सर्वसाधारण उभिएको देखेपछि मोदी गाडीबाट ओर्लिए । मोदीले पेटीतर्फ अघि बढ्दै केही सर्वसाधारणसँग हात समेत मिलाए ।